SANTHITSA - Page 102 of 107 - News and Entertainment
ငြိမ်” •••••••• တစ်နေ့သ၌ ကျွန်ုပ်ထံသို့ ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေကြီးဖြစ်သူ ကိုဖောင်တိန်သည် ရောက်ရှိ၍လာလေ၏။ရောက် လျှင်ရောက်ခြင်းပင်၎င်းက – “သေဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပြီးပြီလား” ဟု ထုံးစံအတိုင်း နှုတ်ဆက်လိုက်လေတော့၏။ထိုအခါ ကျွန်ုပ် က – “သေဖို့ပြင်ဆင်ချိန်မရသေးဘူး.. ခင်ဗျားအခု ထမင်းစားဖို့ လာတာမဟုတ်လား..”ဟု ကိုဖောင် တိန်အား ပြန်၍မေးလိုက်လေရာ ၎င်းက – “ဟုတ်တယ်ဆရာစိုး .. ကျုပ်ထမင်းစားချင်တယ် ..၊ရှောက်သီးသုတ်နဲ့ စားချင်တယ် ..”ဟု တောင်း ဆိုသောကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် အနီးရှိ လူတစ်ယောက်ကို အကူအညီတောင်းကာ တိုးချောင်လေးဘူတာ ဈေးသို့လွှတ်၍ အပြေးအလွှား ရှောက်သီးတစ်လုံး ၀ယ်ခိုင်းလိုက်ရလေ၏။ ရှောက်သီးရလာသောအခါ ကျွန်ုပ်သည် ကိုဖောင်တိန်ကြီးအား ရှောက်သီးသုတ်ပေးရန် အတွက် ပြင်ဆင်နေစဉ် အချိန်တွင် ကိုဖောင်တိန်သည် …
ကင်ဆာကုသမှု ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကို အပ်စိုက်ကုသခြင်းဖြင့် သက်သာ
ကင်ဆာကုသမှု ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကို အပ်စိုက်ကုသခြင်းဖြင့် သက်သာ တက္ကဆတ် ပြည်နယ် ဟူစတန် မြို့ အန်ဒါဆန်ဆေးတက္ကသိုလ် ကင်ဆာဌာန ပါမောက္ခ လောရင်ဇိုကိုဟန် ဦးဆောင် သော အဖွဲ့က ကင်ဆာရောဂါ ကုသရန် အမေရိကန်နှင့် တရုတ် နိုင်ငံမှ လူနာ ၃၃၈ ယောက်ကို ဓာတ်ရောင်ခြည်ပေး ကုသပြီးနောက် ၂စု ခွဲကာ အပ်စိုက် ကုသမှု စမ်းသက်ခဲ့ပါတယ် ။ ဦးခေါင်းနှင့် လည်ပင်း ဆိုင်ရာ ကင်ဆာ ရောဂါသည် များကို ဓာတ်ရောင်ခြည်ပေး ကုသရာမှာ ဘေးထွက် ဆိုကျိုးဖြစ်တဲ့ ခံတွင်း ခြောက်ခြင်းကို ကုသဖို့ အပ်စိုက် ပညာနဲ့ စမ်းသက် ကြည့်တာပါ ။ ဓာတ်ရောင်ခြည် …
ဆံပင် ဆိုးဆေးကြောင့် တစ်သက်တာ ရုပ်ပျက် ဆင်းပျက် ဖြစ်ရသူ
ဆံပင် ဆိုးဆေးကြောင့် တစ်သက်တာ ရုပ်ပျက် ဆင်းပျက် ဖြစ်ရသူ ဆံပင်ဆေးဆိုးတဲ့ လူတိုင်း သိသင့်တာက ဆေးက သွေးနဲ့ တည့်ရဲ့လား ကိုယ့် အရေပြားနဲ့ တည့်ရဲ့လားဆိုတာကို စမ်းသက် ပြီးမှ ဆေးဆိုး သင့်ပါတယ် ။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် အင်္ဂလန် အနောက်ပိုင်းက ရော်ဘင်ချယ်ရီ လို ဒုက္ခများသွား နိုင်ပါတယ် ။ ချယ်ရီ ( ၂၉နှစ် ) က လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ် လောက်တုန်းက ဆံပင်ဆေးဆိုးရင် အလားဂျစ် ( သွေးနဲ့ မတည့်ခြင်း ) ဖြစ်ပြီး သေလု မတတ် ဖြစ်ခဲ့ ရပါတယ် ။ …
ပါဝါဘန့် သုံးတဲ့သူတွေ သတိထားကြရမယ့် အချက်
ပါဝါဘန့် သုံးတဲ့သူတွေ သတိထားကြရမယ့် အချက် ပါဝါဘန့်ကြောင့် မီးလောင်သွားတဲ့ ကား လူ တော်တော် များများက ပစ္စည်း အသေး တော်တော် များများကို ကားဒက်ရ်ှဘုတ်ပေါ် တင်ကြတယ် ။ ကားဒက်ရှ် ဘုတ်က နေရာင် တိုက်ရိုက် ထိတွေ့ နေရာ မျိုးပါ ။ ဖုန်းလို မျိုး ဘတ်ထရီ ပါတဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း တွေကို ကားဒက်ရှ် ဘုတ်ပေါ်မှာ တင်ထားတယ် ဆိုရင် အပူလွန်ပြီး မီးလောင် ကျွမ်းနိုင် ပါတယ် ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကားပေါ်မှာ ပူနိုင်တဲ့ နေရာ တွေမှာ လျှပ်စစ် ပစ္စည်း တွေကို အချိန် ကြာမြင့်စွာ …
ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ရက်နေ့ ဆိုတာ
ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ရက်နေ့ ဆိုတာ ၁၉၃၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ ရက်နေ့မှာ ဝေါ့ဒစ္စနေက ထုတ်လုပ်တဲ့ စနိုးဝှိုက်နဲ့ လူပုလေး ၇ ယောက် ကာတွန်းရုပ်ရှင်ကို စတင်ပြ သ တဲ့ နေ့ပါပဲ။ ဒီနေ့ဆိုရင် ၈၃နှစ် ပြည့်ပါပြီ။ နှစ်ပေါင်း ၈၀ ကျော်ကြာခဲ့သည့် တိုင်အောင် ဒီကနေ့အထိ လူငယ် လူကြီး ကလေး ကအစ ပြန်ကြည့်တိုင်း အရသာရှိနေတဲ့ ကာတွန်းရုပ်ရှင်ပါ။ ဘယ်တော့မှ ရိုးအီသွားတယ်ဆိုတာ မရှိတဲ့ ကာတွန်းကားပါ။ ကာတွန်းကားလို့ ဆိုပေမဲ့ မြူးဇစ် နဲ့ အန်နီမေးရှင်းကို တွဲထားတဲ့ ရုပ်ရှင် ဖြစ်ပါတယ်။ စင်ဒရဲလား ဇတ်လမ်းက ဂျာမန်တွေရဲ့ အိပ်ရာဝင် …
အလှအပကို ဖျက်တဲ့အရာတွေကို ဘယ်လိုတွန်းလှန်မလည်း””””
အလှအပကို ဖျက်တဲ့အရာတွေကို ဘယ်လိုတွန်းလှန်မလည်း”””” မိန်းမသားများအတွက် အလှအပကို ဖျက်ဆီးမဲ့ အရာတွေဟာ အမှူမဲ့အမှတ်မဲ့ ဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဝင်ရောက်လာတဲ့အခါ ဘယ်လိုမောင်းထုတ်မလည်း ဘယ်လို ကာကွယ်မလည်း လူတိုင်းလိုလို ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ အလှအပနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ပြဿနာတစ်ချို့ကို အလွယ်တကူ ဖြေရှင်းနိုင်မဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကို သိထားသင့်ပါတယ်။ ခြေထောက်အလှကိုဖျက်နေတဲ့ကိစ္စ”’ သင့်ရဲ့ ခြေဖနောင့်မှာ အက်ကွဲပြီး ကြည့်ရဆိုးဆိုး နေထိုင်ရ ခက်ခက်တွေ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် အခမ်းအနားတွေ တက်တဲ့ အခါပဲ ဖြစ်စေ လူအများနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆက်ဆံရတာပဲဖြစ်ဖြစ် သင့်မှာ အရှက်ရစေမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကို ဘယ်လို ကာကွယ်ဖြေရှင်းမလည်း သင့်မျက်နှာပြင်မှာ လိမ်းနေတဲ့အစိုဓာတ်ထိန်း ခရင်မ်ကို ပဲ သင့်ခြေထောက်မှာ အသုံးပြုပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ …
စတိုင်ရှိလို့ စတားဖြစ်နေကြတာပါ…. ဘောလီးဝုဒ်က တစ်ဖြည်းဖြည်း ကျယ်ပြန့်လာတော့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားတည်းနဲ့ ပေါက်ဖို့ မလွယ်ကူတော့ပါဘူး။ အဲ့ဒါအပြင် တလ်ဂူးတွေ ရိုက်တဲ့ ဟင်ဒီဇာတ်ကားတွေ က ဇာတ်အိမ် ခိုင်လွန်းတာကြောင့် ဘောလီးဝုဒ် ထဲကို တောလီးဝုဒ်က တိုးဝင်လာတော့ တော်ရုံလောက်နဲ့ အိန္ဒိယ ရုပ်ရှင်လောက ကို ထိုးဖောက်ဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး။ အိန္ဒိယနိုင်ငံက အခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ မတူတာက လူဦးရေ ၇၀ ရာခိုင်းနှုန်းက ရုပ်ရှင် ကြည့်ကြတာပါပဲ။ တော်ရုံ စတိုင်လောက်နဲ့က ဘောလီးဝုဒ်မှာ မပေါက်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘောလိဝုဒ်က စတားတွေတိုင်းမှာတော့ စတိုင် တွေ ရှိနေကြပါတယ်။ အဲ့တော့ မီဒီယာတွေက လည်းအပတ်စဉ် စတိုင်လန်းတဲ့ အဝတ်အစားနဲ့ ဒီဇိုင်သစ်တွေကို ဖော်ပြပေး …
ငယ်ရွယ်သူများသတိမူမှ””” မိန်းမသားများဆိုတာ ပန်းပွင့်လေးတွေနဲ့ သဏ္ဍာန်တူပါတယ်။ နုညံတယ် လှပတယ် မွှေးရနံတို့နဲ့ စွဲမက်ဖွယ်ရာဖြစ်တဲ့ ပန်းပွင့်ကလေးတွေမှာ အပြစ်အနာဆာမရှိလေ လှလေမို့ မိန်းကလေးများသည်လည်း မိမိကိုယ်ကိုယ်မိမိ အပြစ်အနာ ကင်းအောင်နေထိုင် ကျင့်ကြံနိုင်မယ်ဆိုရင် လှသော မွှေးသော ပန်းလေးတစ်ပွင့် ဖြစ်လာနိုင်မှာ မလွဲပါ။ ဆယ်ကျော်သက်တို့သိဘို့…. ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ် ဖွံဖြိုးမှူ အလွန်ပင် မြန်လှပါတယ်။ အဲ့သည်လိုဖွံဖြိုးမှူအား များတာကြောင့် ဖွံဖြိုးမှူကို ကျော်လွန်ပြီး အလွန်အမင်း အရေပြား ကျုံးခြင်း ဆန့်ခြင်း များဖြစ်လာပြီး striae လို့ခေါ်တဲ့ အကြောပြတ်ရာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာ တတ်ပါတယ်။ ကိုယ်လက်လှူပ်ရှား အားကစား အပြင်းအထန် လုပ်သူတွေ အလေးတုံးများနဲ့ ကစားသူတွေ ဟာဆိုရင် အကြောပြတ်ရန် ရာခိုင်နှူန်း …
ကျန်းမာလှပချင်သလား””’ ပျိုမေတို့ အတွက် ကျန်းမာပြီး လှပမှုကို ပေးစွမ်းမဲ့ အစားအစာထဲမှာ ပဲပင်ပေါက်လည်း ပါတယ်ဆို တာ သိစေချင်ပါတယ် ။ ပဲပင်ပေါက်ဟာ မီးဖိုဆောင်ထဲက ရတနာ တစ်ပါးပါ ။ ပဲပင်ပေါက်မှာဗီတာမင်တွေ သတ္ထုဓာတ်တွေ အမြောက်အများ ပါဝင်တဲ့ အပြင် ခန္ဓာကိုယ်ကို အကျိုးပြုမဲ့ဓာတ်တွေလည်း များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ သွေးအားနည်းရောဂါ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါနဲ့ အသည်းရောင်ရောဂါ တို့ကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ် ။ ပဲအမျိုးမျိုးဟာ ခန္ဓာကိုယ် အတွက် လိုအပ်နေတဲ့ ဓာတ်တွေကို များစွာ ပေးနိုင်တာကိုတော့ သိပြီးဖြစ်ပါ လိမ့်မယ် ။ ဒါကြောင့် ပဲကနေ အညှောင့် ပေါက်သွားတဲ့ အခါ အဲ့သည့် အကျိုးပြုဓာတ်များဟာ ပိုမိုမြင့်မားသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ …
သဘာဝ Toner ””’
သဘာဝ Toner ””’ ပျိုပျိုမေတို့ အတွက် ငွေကုန် ကြေးကျလည်း သက်သာ အလွယ်တကူ အနီး အနားမှာလည်း ရရှိနေတဲ့ သဘာဝက ပေးထားတဲ့ သစ်သီးဝလံများ ထဲက ဖရဲသီးဟာ အကောင်းဆုံးသော မျက်နှာပြင် အရေပြား အားဆေးတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ် ။ ဓာတုပစ္စည်းများ နဲ့ ဖော်စပ်ထားတဲ့ Toner များစွာ ရှိပေမဲ့ သဘာဝက ပေးတဲ့ သစ်သီးများရဲ့အစွမ်းဟာ အန္တရာယ် ပိုကင်း စေနိုင်တာမို့ လုပ်ဆောင်ကြည့်ပါလို့ တိုက်တွန်း ချင်ပါတယ် ။ ။ ပြုလုပ်ရမှာ ကတော့…… ဖရဲသီး အရည်ကို ဂွမ်း ဒါမှမဟုတ် စွပ်ကျယ်စ သန့်သန့် တစ်စနဲ့ စုပ်ယူပြီး …
Previous 1 … 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Next